देवयानीको मोबाइलमा दीपेन्द्रको फोन ! यसो भनेर विदा भएका थिए « Online Tv Nepal
देवयानीको मोबाइलमा दीपेन्द्रको फोन ! यसो भनेर विदा भएका थिए
Published :2June, 2018 10:28 pm
आज भन्दा १७ वर्ष पहिले अर्थात २०५७ सालमा युवराज दीपेन्द्र वीरविक्रम शाह आर्मीको ट्रेनिङ लिइरहेका थिए । प्याराजम्प ट्रेनिङका लागि उनको पहिलो दिन सुरु हुँदै गर्दा उनले फोनमा भने, ‘जब मलाई तिमी आफ्ना हातले बनाएको ब्रेकफास्ट खुवाउँछौ, तब मात्रै प्याराजम्प गर्छु ।’ फोनको अर्को छेउमा थिइन् देवयानी राणा ।
जनआस्था साप्ताहिकको ६ असार २०५८ मा छापिएको रिपोर्टिङअनुसार देवयानीले ब्रेकफास्टसहित दीपेन्द्रलाई विमानस्थलमा भेटिन् । ब्रेकफास्ट लिएपछि दीपेन्द्र हेलिकप्टर चढे । हेलिकप्टर उचाइमा पुगेपछि ढोका खोलेर आकाशबाट हाम्फाले । देवयानी मनोहरा खोला किनारामा पुगिन्, जहाँ प्यारासुटबाट दीपेन्द्र झर्दै थिए ।
तल झरेपछि दीपेन्द्र आफैले ड्राइभिङ गरेर देवयानीलाई उनको घर महाराजगञ्ज लगेर छाडे, त्यसपछि उनी आफ्नो निवास नारायणहिटी गए । देवयानीका लागि दीपेन्द्रको यस्तो क्रेज पहिलोपटक प्रकट भएको थिएन, पटक–पटक दोहोरिएका थिए ।
दीपेन्द्र मात्रै होइन देवयानी पनि उनलाई खुब माया गर्थिन् । पशुपतिशम्शेर राणाकी कान्छी छोरी देवयानीले दीपेन्द्रलाई ओमेगा घडी जस्ता महँगा उपहार दिएकी थिइन्, त्यसैगरी उनले दीपेन्द्रका लागि क्यामरा पनि किनिदिएकी थिइन् ।
दीपेन्द्र–देवयानी ११ वर्ष लामो प्रेम
बेलायतका धनीमानीमध्ये एक छन्, लर्ड क्यामोयज । क्यामोयज जसको बेलायती दरवारसँग विशेष सम्बन्ध छ, उनी र वीरेन्द्र शाहले बेलायतको प्राइभेट स्कुल इटनमा सँगै पढेका थिए ।
बुढानिलकण्ठबाट फस्ट डिभिजनमा एसएलसी पास गरेपछि २०४५ सालमा वीरेन्द्रले दीपेन्द्रलाई पनि कलेज पढ्न बेलायतको इटन नै पठाए । यसपटक वीरेन्द्रका सहपाठी लर्ड क्यामोयज दीपेन्द्रका लागि स्थानीय अभिभावक बने । दीपेन्द्र इटनमा पढ्दै थिए । संयोग, त्यतिबेला देवयानी पनि पढ्नका लागि बेलायत नै पुगिन् । उनको स्थानीय अभिभावक पनि क्यामोयज नै बने ।
तर देवयानी भने फरक कलेजमा पढ्थिन् । क्यामोयजका चार सन्तानमध्ये कान्छी छोरी सोफी देवयानीको साथी बनिन्, कान्छा छोरा विलियम दीपेन्द्रका साथी बने ।
अक्सफोर्डसायरमा क्यामोयजको स्टोनर पार्क नामक भव्य बंगला छ । यही बंगलामा एक दिन पार्टी थियो ।
विलियमसँगै इटन कलेजबाट दीपेन्द्र आएका थिए, सोफीसँग देवयानी । यहीँ देवयानी र दीपेन्द्रबीच पहिलो भेट भएको थियो । १८ वर्षका दीपेन्द्र र १७ वर्षकी देवयानीले एकअर्कालाई यहीँ दिल दिएका थिए ।
‘उनीहरु १३ वर्षदेखि सँगै थिए’, जेठ १९ गते भएको राजदरवार हत्याकाण्डको छानविन गर्न गठित समितिसँगको बयानमा दीपेन्द्र र देवयानीको सम्बन्ध बारे सुप्रिया शाहले पुष्टि गरेकी छिन् ।
प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय अध्यक्ष तथा सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्य रहेको समितिले सुप्रियालाई सोधेको थियो, ’वैवाहिक जीवनमा (दीपेन्द्रले) कुनै मान्छेसँग कोहीसँग गर्ने कुरा आदि इत्यादि केही कुरा गर्नुहुन्थ्यो ?
जवाफमा सुप्रियाले भनेकी छिन्, ‘वैवाहिक जीवनको त्यस्तो त अब त्यही देवयानीसँगै गर्ने भन्ने उहाँको इच्छा थियो क्या रे । अब यो विषयमा तपाईंले डिटेलमा सोध्ने हो भने त उहाँ (देवयानी) लाई सोधे राम्रो हुन्छ है, मलाई होइन ।’
फेरि समितिले सुप्रियालाई सोधेको थियो, तर तपाईंसँग केही कुरा हुँदैन ? अथवा म देवयानीसँग गर्दैछु भन्ने बारेमा ?
जवाफमा सुप्रियाले भनेकी थिइन्, देवयानीका बारेमा मसँग अहँ । यो देवयानीलाई सोधे राम्रो हुन्छ ।
तर सुप्रिया थिइन् पहिलो प्रेम
दीपेन्द्र बूढानीलकण्ठमा कक्षा ७ मा पढ्थे, त्यतिबेला उनले सुप्रिया शाहलाई पहिलो प्रेमपत्र लेखेका थिए । राजदरवारमा तीन दशक बिताएका पूर्व सैनिक सचिव विवेककुमार शाह आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरवार’मा लेख्छन्,
बूढानीलकण्ठ स्कुलमा कक्षा ७ मा अध्ययन गरिरहेकै बेला दीपेन्द्र सरकारले मसँग एक पटक आफ्नो पीडा ‘सेयर’ गरिबक्स्यो, ‘मलाई मुमाले अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजिबक्सन्छ । तिमीले मुमालाई सम्झाइदेऊ ।’
यसमा मैले केही गर्न र भन्न सक्ने कुरा थिएन । खास कुरा त्यति बेला के परेछ भने सरकारले सुप्रिया शाहलाई मन पराइबक्सेछ ।
सरकारले सुप्रियालाई ‘लभलेटर’ लेख्ने गरेको कुरा कुनै स्रोतबाट बडामहारानी सरकारले थाहा पाइबक्सेछ । सायद त्यसबारे बडामहारानी सरकारले युवराजाधिराजलाई भनिबक्स्यो, जुन कुरा दीपेन्द्र सरकारलाई मन परेन र मलाई आफ्नो पीडा ‘सेयर’ गरिबक्सेको थियो ।
सुप्रिया सरकारसँगै पढ्ने त होइन, तर कक्षा ७ मा पढ्दादेखि नै दीपेन्द्र सरकारले सुप्रियालाई मन पराइबक्सेको थियो । सरकारले सुप्रिया बाहेक पनि विभिन्न केटीलाई भेट्ने र ‘लभलेटर’ लेख्ने गरेको कुरा समेत हामी एडीसीले थाहा पाइरहेका हुन्थ्यौँ । त्यो उमेरमा ‘गर्लफ्रेन्ड’ बनाउने र ‘लभलेटर’ लेख्ने गरेको बडामहारानीलाई मन पर्ने कुरै भएन ।
खासमा सुप्रिया र दीपेन्द्र नातामा भने दाजुबहिनी थिए, तर विवाह गर्नका लागि यो नाताले छेकबार भने लाग्दैन्थ्यो । मुमा बडामहारानी रत्नका नाति दीपेन्द्र थिए भने सुप्रिया रत्नकी दिदीकी नातिनी थिइन् । रत्नको चाहना पनि दीपेन्द्रले सुप्रियासँग विवाह गरोस् भन्ने थियो । स्वयं दीपेन्द्र पनि एसएसलसी पास गर्ने समयसम्म सुप्रियासँग विवाह गर्न चाहन्थे ।
विवेक शाहका अनुसार, तर रानी ऐश्वर्य भने यो विवाहका लागि तयार थिइनन् । सुप्रियासँग विवाह गर्न हुँदैन भन्नका लागि रानी ऐश्वर्यसँग दुई कारण थिए, एक नजिकको नातामा विवाह गर्दा सम्वन्ध राम्रो हुँदैन, बच्चा पनि राम्रो जन्मँदैन । दोस्रो, ‘सुप्रिया नट कम्पिनेन्ट टु दी क्वीन’।
राजा वीरेन्द्र भने आमा रत्न र श्रीमती ऐश्वर्यको चेपुवामा परेका थिए । दीपेन्द्रले एसएलसी सकेलगत्तै परिवारमा विवाहको चर्चा चलिरहेको थियो । त्यही चर्चाको बीचमा दीपेन्द्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बेलायतको इटन पुगे ।
इटनमा पनि ‘जोली’ थिए दीपेन्द्र
जब दीपेन्द्र इटनमा थिए, त्यतिबेला उनका विषयमा थुप्रै हल्लाहरु हुन्थे । बेलायतबाट छापिने टेलिग्राफको २२ जेठ २०५८ को रिपोर्टअनुसार दीपेन्द्रसँग बेडमा लोडेड रिभल्वर हुन्छ भन्ने हल्ला कलेजका विद्यार्थी माझ थियो । त्यसैगरी उनीसँग नेपालमा थुप्रै रखैल छन् र त्यसलाई बाहिरबाट बडिगार्डले घेरेका छन् भन्ने हल्ला पनि थियो ।
दीपेन्द्रका विषयमा जतिसुकै हल्ला बनाइए पनि वास्तवमा उनी उज्ज्वल तर रंगिन, शारीरिक रुपमा मोटो तर कराते खेल जानेका विद्यार्थी थिए । अरु युवाजस्तै उनी पिउनमा सौकिन थिए, युवतीको साथ उनलाई मन पर्दथ्यो, दीपेन्द्रका साथीहरुलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टिङमा भनिएको छ ।
इटनका अभिभावक क्यामोयजका छोरा विलियम स्टोनरले टेलिग्राफलाई भनेका थिए, दीपेन्द्र मेरो ठूलो दाजु जस्तो थियो, स्कुलमा सँगै रहँदा हामीले तीन वर्ष सबै काम एक साथ गर्यौं, हामी निक्कै नजिक थियौं, ऊ एक दयावान थियो र धेरै संवेदनशील ।
इटनमा पढ्दा दीपेन्द्रको जापानी युवतीसँग पनि चक्कर चलेको थियो । विवेक शाहको पुस्तकअनुसार ती युवती दीपेन्द्रलाई भेट गर्न नेपालसम्म आएकी थिइन् । नेपालमा दीपेन्द्र र ती युवतीबीच विवाहका विषयमा निक्कै ठूलो लफडा पर्यो, किन भने दीपेन्द्रले ती युवतीलाई पनि विवाह गर्छु भनेका थिए । लफडा परेपछि दीपेन्द्रले ती युवतीलाई एयरपोर्ट पुर्याउन एडिसी सेनानी गजेन्द्र बोहरालाई पठाए । एयरपोर्टमा ती युवतीले बोहोरालाई भनिन्, ‘योर क्राउन प्रिन्स इज म्याड, हि वील डाई ए डग्स डेथ ।’
युवतीसँग लीफ्टमा साढे दुई घण्टा
मैले देखेको दरवारमा विवेक शाहले दीपेन्द्रको युवती प्रेमका विषयमा बेलग्रेडको एउटा प्रसङ्ग जोडेका छन् । उनी लेख्छन्,
वीरेन्द्र सरकार बेलग्रेड सवारी हुनुभन्दा दुई दिनअघि हामी त्यतातिर लाग्यौँ । राजदूत मोटर लिएर बेलग्रेड जानुभयो । हामी चाहिं जहाजमा गयौँ । दुई रात हामीले होटलमै बितायौँ । त्यहाँ पनि रातभर रक्सी खाने, डिस्को जाने गर्न थाल्यौँ । मैले कहिलेकाहीँ यसो नगरौँ भन्दा सरकार रिसाइबक्सन्थ्यो ।
अनि सरकारले भने अनुसार सबै कुरामा साथ दिनैपर्ने हुन्थ्यो । दुई दिनपछि वीरेन्द्र सरकार र बडामहारानी सरकारको सवारी भयो। सरकारहरुलाई भिल्ला दिइएको थियो । तर दीपेन्द्र सरकार भिल्लामा बस्न मानिबक्सेन । ‘म त होटलमै बस्छु’ हुकुम भयो । सरकारको एडीसी भएकाले म पनि होटलमै बसें । सम्मेलनमा गर्नुपर्ने कामदेखि सवारी चलाउनेसम्मका सबै काम मैले होटलबाटै गरें । दिनभरि सम्मेलनमा भाग लिएर साँझ होटल फर्केपछि हामी रक्सी खान्थ्यौँ ।
राति सहर घुम्थ्यौँ। बेलग्रेडमा मैले के देखेँ भने युवराजधिराज सरकार केटीहरुको मामिलामा ज्यादै कमजोरी देखाइबक्सन्थ्यो । सरकार बेलाबेला मैले ‘यसो गरें, उसो गरें’ भनेर विभिन्न प्रसङ्गहरु सुनाइबक्सन्थ्यो । कुरा सुन्दा सरकार ज्यादै ‘सेडिस्ट नेचर’ को पनि लाग्यो, मलाई । एक पटक सरकार होटलमा रातभर ड्रिङ्क्स गरेर बसिबक्स्यो ।
एक जना स्थानीय केटी पनि सँगै थिई । राति तीन बजे सरकार ‘म यो केटीलाई तल छोडेर आउँछु’ भनेर कोठाबाहिर सवारी भयो । सुन्दरप्रताप रानासहित अरु दुई जना एडीसी थिए । लिफ्ट चढ्ने बेलामा सरकारले ‘तिमीहरु जानुपर्दैन’ हुकुम भयो । सरकार त्यो केटीलाई लिएर लिफ्टभित्र छिरिबक्स्यो । मैले सुन्दरलाई भर्याङबाट तल पठाएँ ।
अर्को एडीसीलाई माथि नै राखें । सरकार लिफ्टमा साढे दुई घण्टा राज भई बिहान साढे ५ बजे मात्र तल ओर्लिबक्स्यो । तल गएको एडीसी तलै र माथिको एडीसी माथि नै कुरेर बस्नुपरेको थियो । लिफ्ट बिग्रिएको हो कि भनेर कसैलाई खबर गर्ने कुरा पनि आएन । एकै पटक बिहान सरकार हाँस्दै सवारी भयो ।
ऐश्वर्यको ’लिस्ट’मा थिइन् गरिमा
रानी ऐश्वर्यले दीपेन्द्रको पहिलो प्रेम सुप्रियामा रानी हुने गुण देखेकी थिइनन् भने देवयानीमा पनि उनको रुचि थिएन । नागरिकता नेपाली भए पनि देवयानी आधा भारतीय थिइन् । पशुपति राणा र भारतीय राजपरिवारकी उषाराजे सिन्धियाकी कान्छी छोरी देवयानीसँग दीपेन्द्रको विवाह गर्दा राजनीतिक र वित्तीय रुपमा दरवारमा देवयानी प्रभावशाली हुने विश्लेषण ऐश्वर्यको थियो ।
उषाकी आमा भारतीय जनता पार्टीमा थिइन् भने दाजु माधवराव सिन्धिया काँग्रेस पार्टीभित्र शक्तिशाली थिए । सिन्धिया परिवार राजनीतिक रुपमा मात्रै प्रभावशाली थिएन, वित्तीय हिसाबमा पनि शक्तिशाली थियो। त्यसमाथि दरवारमा तीन पुस्तादेखि भारतीय राजघरानासँग विवाह गरिएको थिएन ।
देवयानीको लालनपालनदेखि पढाइसम्म भारतमा भएको थियो ।
सुप्रिया र देवयानीलाई ’नो’ भनेकी रानी ऐश्वर्य भने गरिमा राणालाई बुहारी बनाउन चाहन्थिन् । एसएलसी टपर गरिमासँग दीपेन्द्रको बिहे गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा आमासँगै छोरी श्रुतिको पनि जोडबल थियो । श्रुतिको विवाह गोरखशम्शेर राणासँग भएको थियो, गोरखका काका लोकभक्त राणाकी छोरी गरिमा श्रुतिकी नन्द थिइन् ।
विवेक शाहले ‘मैले देखेको दरवार’ पुस्तकमा १३ असार २०५७ मा नारायणहिटी दरवारमा भएको रात्रिभोजको एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् । यो भोज दीपेन्द्रको २९ औं जन्मोत्सवका अवसरमा राखिएको थियो। राति १ बजे रात्रिभोज सकिएपछि युवराजले शाही नातेदार र साथीहरुलाई लिएर त्रिभुवन सदन गए । त्यहाँ उनको विवाहको प्रसङ्ग चल्यो। र विवाहका विषयमा विवाद पनि भयो ।
श्रुतिले दीपेन्द्रलाई ’दादा अब तपाईले गरिमासँग विवाह गर्नुपर्छ’ भनेकी थिइन्। जवाफ सुन्नासाथ दीपेन्द्रले आफ्नै गर्भवती बहिनी श्रुतिलाई झापडसमेत हानेका थिए। त्यसको पुष्टि डिस्कभरी च्यानलमा प्रसारण भएको ‘जिरो आवरः अ रोयल म्यासेकर’ नेपाल डकुमेन्ट्रीलाई श्रुतिका श्रीमान गोरखले दिएको अन्तर्वार्तामा समेत गरेका छन् ।
विवाहको विषयले ऐश्वर्य र दीपेन्द्रबीच त तनाव थियो नै ऐश्वर्य र रत्नबीच पनि विवाद थियो । तर वीरेन्द्र भने यो विवादबाट पन्छिने प्रयास गर्थे। विवेक शाहकाअनुसार दीपेन्द्रको विवाहको विषयलाई वीरेन्द्रसँग राखे उनी प्रतिक्रिया दिंदैन थिए। कतिपय अवस्थामा उनी ’विमेन्स डिपार्टमेन्ट, दे आर वर्किङ अन इट’ भनेर टारिदिन्थे ।
दीपेन्द्र चाहन्थे गुपचुप बिहे
दीपेन्द्रले देवयानीसँग प्रेम मात्रै होइन बिहे पनि गर्न चाहेका थिए । तर परिवारमा उनको हप्किदप्की लाग्ने पारस शाह लगायत केही बाहेक अरु उनको साथमा थिएनन् । बहिनी श्रुति मात्रै होइन भाइ निराजनसमेत आमा ऐश्वर्यको लाइनमा थिए। हजुरआमा रत्न सुप्रियाको पक्षमा । पिता वीरेन्द्र यता न उता । यस्तो बेला दीपेन्द्र खुसुक्क बिहे गर्ने विषयमा समेत सोचिरहेका थिए । विवेक शाह ‘मैले देखेको दरवार’ पुस्तकमा लेख्छन्, सरकारले मसँग कतिसम्म कुरा खोलिबक्सेको थियो भने, ‘यस्तै हो भने म ग्र्यान्डफादरले गरे जस्तै विवाह गर्छु । नागार्जुन गएर कसैले थाहा नपाउने गरी विवाह गर्ने तयारी गर्दैछु । कानुनी रुपमा पनि बुझ्दैछु। वडा अध्यक्षसँग पनि कुरा गर्न लगाएको छु ।’
राजदरबार काठमाण्डु महानगरपालिकाको वडा नं. ३ मा पर्छ । सरकारले त्यही वडाबाट विवाह दर्ताको प्रक्रिया मिलाउन लगाइबक्सेको रहेछ ।
वडा अध्यक्ष र आफ्ना नजिकका साथीभाइ बोलाएर नागार्जुन बङ्गलामा गएर ‘सिभिल म्यारिज’ गर्ने तयारीमा सरकार होइबक्सन्थ्यो । राजा त्रिभुवन बाहिर गएको मौकामा तत्कालीन युवराजाधिराज महेन्द्रले पनि रत्नसँग यसरी नै ‘सिभिल म्यारिज’ गरिबक्सेको थियो रे। यसरी दीपेन्द्र सरकारले जेठ १९ को घटना हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि नै देवयानीसँग विवाह गर्ने तयारी सुरू गरिबक्सेको थियो । सरकारले अरुसँग विवाह गर्ने कुनै सम्भावना नै थिएन ।
जब जेठ १९ आयो
१९ जेठ २०५८, शुक्रबार ।
राति ८ बजेर १२ मिनेट गएको थियो । दीपेन्द्रले आफ्नो ९८१०२१५१३ नम्वरको मोवाइल फोनबाट ९८१०२४३३९ नम्वरको मोवाइलमा फोन गरे । नेपाल ग्यासका नाममा दर्ता भएको यो फोन देवयानीले उठाइन् ।
दीपेन्द्रले देवयानीलाई सोधे, ‘आइतबार सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन कार्यक्रममा तिमी आउँछ्यौ होइन ?’
दीपेन्द्रले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन खोज्दै थिइन् देवयानी, तर मोवाइलमा आवाज स्पष्ट आएन ।
छानविन समितिलाई दिएको बयानमा देवयानी भन्छिन्, ‘सरकार मैले कुरा बुझिनँ भन्दै थिएँ । फेरि सोधिबक्स्यो, मैले जवाफ दिनुभन्दा अगाडि नै फोन राखिदिबक्स्यो । यसपटक १ मिनेट १४ सेकेन्ड कुराकानी हुँदा पनि देवयानीले दिएको जवाफ दीपेन्द्रले सुन्न सकेनन् ।
देवयानीले फेरि आफ्नो कोठामा रहेको ल्याण्डलाइनबाट दीपेन्द्रको मोबाइलमा ८ बजेर १९ मिनेटमा फोन गरिन् । फोन गयो–गयो तर दीपेन्द्रले उठाएनन् । देवयानीले दिएको बयानअनुसार दीपेन्द्रले फोन नउठाएपछि त्यो फोन अटोमेटिकल्ली ड्युटी एडिसीकोमा ट्रान्सफर भयो । ड्युटी अफिसरसँग देवयानीले भनिन्, सरकारको स्वर अलिकति लरवराई बक्सिरहेको छ । गाथमा आराम छैन कि ? उनले डिउटी अफिसरलाई माथि खोपिमा गएर हेर्न समेत अनुरोध गरिन् । यसपटक चार मिनेट १४ सेकेन्ड कुराकानी भयो ।
त्यसको २० मिनेटपछि ८ बजेर ३९ मिनेटमा फेरि दीपेन्द्रले आफ्नो मोवाइलबाट देवयानीको मोवाइलमा फोन गरे । यसपटक जम्मा ३२ सेकेन्ड मात्रै कुराकानी भयो । दीपेन्द्रले देवयानीलाई भने ‘म भोलि बिहान मात्रै तिमीलाई फोन गर्छु ।’
देवयानीले समितिलाई दिएको बयानमा भनेकी छिन्, गुडनाइट भनेर हुकुम भो । अनि मैले पनि गुड नाइट भने । त्यसपछि फेरि हुकुम भयो, ‘अब म सुत्न लागेको छु है । म भोलि बिहान फोन गर्छु ।’
जेठ १९ गतेको भोलिपल्ट बिहानीसँगै २० गते त आयो । तर गुडनाइट भन्दै विदा भएको देवयानीको मोवाइलमा दीपेन्द्रको गुडमर्निङको फोन आएन ।